नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समू’हको सचि’वालय सदस्य ११ जना, हेरौँ को को नेता पर्लान् त? – Sadhaiko Khabar
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समू’हको सचि’वालय सदस्य ११ जना, हेरौँ को को नेता पर्लान् त?
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण ०३, २०७७ समय: १९:५४:४२
काठमाडौं/ निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी निर्णय दिएलगत्तै विभाजनपछिको भविष्य निश्चित हुनेछ । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहमा अध्यक्षमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको टुंगो लागिसकेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तेस्रो वरियतामा छन् ।
अब नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा महासचिवको टुंगो लाग्न बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले निर्णय दिएलगत्तै सुरेन्द्र पाण्डेको महासचिव बन्ने सम्भावना लगभग निश्चित जस्तै छ । माधव नेपाललाई अध्यक्ष बन्न खनालले समर्थन गरेकाले पाण्डेको सम्भावना बलियो भएको छ । पाण्डेको नाममा माधव नेपाल पनि सकारात्मक छन् ।
महासचिव पदका लागि भीम रावल र जर्नादन शर्मा पनि आकांक्षी छन् । शर्मा प्रचण्ड पक्षधर हुन् भने रावल नेपाल पक्षका हुन् । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा हाल चार जना मात्र सचिवालय सदस्य छन् । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ सचिवालयमा छन् । वामदेव गौतम तटस्थ छन् । उपाध्यक्ष गौतमको नाम नेकपाको दुवै समूहमा राखिएको छ ।
यसैगरी, सचिवालय सदस्य बन्न प्रचण्ड-नेपाल समूहमा ठुलो संख्यामा नेताहरुको दौड चलेको छ । उक्त समूहले कम्तिमा ९ देखि ११ जना सचिवालय सदस्य बनाउने बुझिएको छ । प्रचण्ड, नेपाल र खनाल तीनैजनाको सहमतिमा सचिवालय सदस्य चयन गर्ने तयारी बढाइँदैछ ।
महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डे चयन भएमा उनी स्वतः सचिवालय सदस्य हुनेछन् । प्रचण्ड पक्षधर जर्नादन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुषाल, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र देवेन्द्र पौडेल पनि आकांक्षी छन् ।
माधव नेपाल पक्षधर भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृतकुमार बोहरा, वेदुराम भुषाल, रघुजी पन्त, योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषाल प्रमुख दाबेदार देखिएका छन् । झलनाथ खनाल पक्षका भीम आचार्य पनि सचिवालयमा दाबेदार छन् । सबैलाई मिलाएर सचिवालय बनाउँदा संख्या थपघट हुनसक्ने बुझिएको छ ।